Dolibarr vs Sage - Fahasamihafana: iza no ERP tsara indrindra? | Dolibar MarketPlace
Dolibarr vs Sage - Fahasamihafana: iza no ERP tsara indrindra?
In Dolibarr 0 fanehoan-kevitra
Inona ny Dolibar ERP? dia Open Source Software hitantana ny orinasanao (ERP & CRM). Web ERP sy Open Source CRM rindrambaiko hitantana asa matihanina na fototra (SMEs, freelancers) na ny asan'ny fikambanana sy olona miasa tena, izany hoe: faktiora, vokatra, tolo-kevitra ara-barotra, fifandraisana, fandaharam-potoana, baiko, tahiry, tetikasa, asa. , antoko fahatelo, mailaka ary endri-javatra an-jatony hafa.
Inona no atao hoe Sage? Mitantana kaonty, olona, ​​asa, fandoavam-bola ary banky. Izy io dia mampivondrona ny zavatra rehetra ilainao amin'ny sehatra tokana hitantana ny kaonty, ny vola, ny asa, ny olona ary ny karama.
Raha fintinina, ny Dolibarr ERP dia ao anatin'ny sokajy "CRM" amin'ny stack teknolojia, raha ny Sage ERP kosa dia voasokajy voalohany amin'ny "Accounting".
Izahay dia manazava eto ambany ny endri-javatra sasany natolotry ny Dolibarr izay maimaim-poana avokoa:
Fitantanana ny antoko fahatelo: mpanjifa sy mpamatsy
CRM / Fitantanana varotra
Fitantanana ny fifandraisan'ny olombelona
CMS sy fitantanana tranokala
Amin'ny lafiny iray, ny Sage ERP dia manolotra ireto endri-javatra fototra manaraka ireto izay azo andoavam-bola:
Inona no safidy hafa amin'ny Dolibarr sy Sage? Hitantsika indrindra ireto ERP manaraka ireto:
Vahaolana manokana ho an'ny fitantanana fifandraisana amin'ny mpanjifa (CRM) loharano misokatra izy io izay manome vaovao azo atao tsara ho an'ny mpampiasa ifotony amin'ny fanapahan-kevitra, hetsika ary paikady manakiana, saingy misy module kely kokoa isaky ny tatitra Dolibarr.
Tantano tsara kokoa ny varotrao, ny varotrao ary ny fanohanan'ny mpanjifa amin'ny rindrambaiko CRM an-tserasera an'ny SugarCRM. Ka ity dia ERP manokana ho an'ny orinasa Marketing.
Izy io dia rindrambaiko fitantanana raharaham-barotra ao anatin'izany ny CRM, e-varotra, faktiora, trano fanatobiana entana, fitantanana tetikasa, fitantanam-bola, famokarana ary fitantanam-bola, ERP Odoo c ' dia ny ERP taloha izay antsoina hoe OPENERP ary lasa andoavam-bola.
Sales Cloud dia mametraka ny zavatra rehetra ilainao eo an-tananao. Avy amin'ny kaonty sosialy sy fifandraisana amin'ny finday, Chatter ary Analytics, ary koa ny fiaraha-miasa manerana ny fikambanana manerantany.
Fitaovana fantsona ho an'ny mpivarotra mavitrika. Aoka ianao ho voalamina tsara. Manakatona fifanarahana ao anatin'ny fotoana fohy. Namboarin'ny mpivarotra mavitrika sy mpamorona fampiharana tranonkala matotra.
CRM, Toeram-pivarotana Doli, Dolibarr, Dolibar software, fivarotana Dolibar, Dolibar v14, Dolimarketplace, Dolimarketplace.com, Dolistore, ERP, Fitantanana kaonty, Fitantanana kaonty dolibarr, Palce de marché dolibarr
Fametrahana sy fampivoarana ny maody sy lohahevitra DolibarrHiverina any amin'ny DolibarTutorial 1 Dolibarr ERP: Fitantanana mpampiasa, vondrona ary fahazoan-dàlana amin'ny Dolibarr ERP CRM
Tutorial 6 - Tolo-kevitra ara-barotra sy teny nindramina ao amin'ny Dolibarr ERP CRM
Tutorial 5 ERP Dolibarr - Vokatra sy serivisy ao amin'ny Dolibarr ERP CRM
Tutorial 4 ERP Dolibarr - Fitantanana antoko fahatelo (Prospects, mpanjifa, mpamatsy) ao amin'ny Dolibarr ERP CRM
Fampisehoana endri-javatra vaovao an'ny Dolibarr ERP CRM 13.0
Tutorial 3 ERP Dolibarr: Avelao ny fitantanana ao amin'ny Dolibarr ERP CRM